Ego Kalinda nke Forex FXCC
Home / Nkụzi na Nnyocha / Research / Economic Kalinda
Ego Kalinda nke Forex
Kalenda akụ na ụba bụ ngwá ọrụ bara uru bara uru bụ nke ndị ahịa na-eleghara anya. Na-aga n'ihu usoro; ịmara usoro nhazi nke akụ na ụba site na kalenda, bụ akụkụ dị oké mkpa iji kwado arụmọrụ ahịa. Ịnweta ohere zuru ezu, kalenda akụ na ụba zuru ezu na nke zuru ezu, dị oke mkpa ma maka ndị ahịa FX nke a bara uru na-emesikwu ike.
Olee otú Jiri uru Kalinda gị
Debe ụbọchị maka kalenda
Họrọ mpaghara nkeji data na-akọ
Họrọ obodo nke data na-akọ
Debe kalenda gị iji gosi ụfọdụ mbipụta na ntọhapụ
Họrọ ọkwa nke mmetụta; akwa, ma ọ bụ dị ala
Ihe gbasara akụ na ụba macros, akụkọ na nnata data, nke ndị: gọọmentị, ngalaba gọọmenti na ụfọdụ ụlọ ọrụ nzuzo; dịka Markit na PMI ha a na-akwanyere ùgwù na nke a na-atụ anya ha, nwere ike imetụta oke uru nke ego, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-adabere na ndị ọgbọ ego ọzọ.
N'iburu nke a n'uche, FXCC agbakwunyere kalenda akụ na ụba na-echebara echiche maka ndị ahịa anyị bara uru. Dị ka ọtụtụ kalenda akụ na ụba, ọ nwere atụmatụ na uru dị mfe anyị bịara na-atụ anya site na kalenda isi. Otú ọ dị, anyị agbakwunyere ụfọdụ ọdịnaya na ihe ndị ọzọ iji hụ na kalenda anyị abawanye uru maka ndị ahịa anyị. Kalịnda nwekwara ihe ngosi na-egosipụta ọkwa nke ahịa na-emetụta mgbasa ozi ntọala.
Mgbe ị na-ahọrọ akụkụ dị iche iche site na bọtịnụ, ndị ahịa FXCC ga-enwe ike ịtọ mmasị ha.